iMovie waa la cusbooneysiiyaa iyadoo lagu darayo saameynta shaashadda cagaaran | Wararka IPhone
iMovie waxay ahayd sanado badan mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee aan maanta haysanno ee laga heli karo macruufka si loo abuuro fiidiyowyo, oo leh natiijo wanaagsan oo wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, haddii aan rabno inaan hal tallaabo horay u sii qaadno, waxaan ku qasban nahay inaan u adeegsanno Final Cut haddii aan haysanno Mac ama Adobe Premiere haddii aan haysanno Windows PC.
Si kastaba ha noqotee, cusbooneysiintii ugu dambeysay ee iMovie ee loogu talagalay macruufka, hawl xiiso leh ayaa lagu daray oo noo oggolaanaya ka saar asalka fiidiyowyada laga duubay asalka cagaar ama buluug, si loo awoodi karo isku dhafan muuqaallo kala duwan isla qaab, taas oo noo oggolaan doonta inaan ka soo saarno hal-abuurkeenna iPhone ama iPad laftiisa.
In kasta oo ay run tahay in tani ay tahay ugubnimada ugu weyn ee aan ka helayno iMovie cusboonaysiinta lambarka 2.2.7, ma aha kan keliya. Sida caadiga ah, kooxaha Apple tiro aad u tiro badan oo ah muuqaalada cusub oo cusbooneysiin kasta, shaqooyin cusub oo aan hoos ku faahfaahinayno:
80 soundtracks cusub oo noocyo kala geddisan leh sida qabow, pop iyo shucuur ayaa lagu daray, dhawaaqyo dhawaaqyo oo si otomaatig ah u hagaajinaya oo u dhigma dhererka filimka.
Waxaan ku dari karnaa sawirro leh asal hufan si aan ugu adeegsanno astaan ​​ahaan ama astaamo-biyoodyo.
Waxaan sidoo kale ku dari karnaa sawirro iskudhaf ah si loo abuuro saameyn sawir iyo muuqaal ah.
La jaanqaadka ClassKit, ardaydu waxay u soo bandhigi karaan shaqadooda fiidiyow macallimiinta iyagoo u maraya arjiga Fasalka.
Haddii aan helno wicitaan ama aan furno codsi kale inta aan fiidiyowga sameyneyno, markaan ku noqonno iMovie, waxaan ka heli doonnaa isla shaashadda tafatirka halkii aan joognay, ee kuma xirno shaashadda guriga ee arjiga.
Suurtagalnimada in lala wadaago iMovie Theather waa la tirtiray, sidaa darteed waa inaan ku keydinaa filimadeena iyo isjiidkayaga Sawirrada iCloud si aan ugu awoodno inaan ku daawado qalabka kale.
iMovie ayaa loo heli karaa soo dejin gebi ahaanba bilaash iyada oo loo marayo xiriirka aan ka tago dhamaadka qodobkan. Si aad u awoodo inaad shaqeyso, qalabka waa in lagu maareeyaa macruufka 11.4 ama ka dib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » iMovie ayaa cusbooneysiineysa ku darista shaashadda cagaaran
Apple wuxuu iska ilaalin lahaa "vetoes" ka yimaada Shiinaha isagoo sameeya iPhone-ka Hindiya